Oromo Free Speech: AKEEKKACHIISA (Attention): Wayyaaneen Atileetota Oromoo akka Fayyisaa Lilleesa balaaleffatan qophii irra jirti
The Ethiopian government is in preparation to force these and other athletes to condemn marathon runner Feyisa Lilesa on public TV for his so called treason in Rio 2016. This act amounts to another human rights violation against the will of these young athletes. The world must carefully watch the behavior of this regime of the jungle.
The Ethiopian government is in preparation to force these and other athletes to condemn marathon runner Feyisa Lilesa on public TV for his protest in Rio 2016. This act amounts to another human rights violation against the will of these young athletes. The world is carefully watching the behavior of this regime.
Wayyaaneen tarkaanfii gootummaa Fayyisaa Leellisaatiin waaroo salphinaa uffatte jalaa dandamachuuf atileetonni Oromoo muraasni miidyaan bahanii Fayyisaa akka balaaleffataniif yaalii godhaa akka jirtu dhageenyee jirra. Atileetiin Oromoo kamuu “Oromoo ajjeesuun, hidhuunifi lafarraa buqqaasuun sirriidha, Fayyisaan yakka kana mormuun dogongora” jedhee akka hin amanne ni beekna. Sodaa Wayyaaneetifi faaydaa yerootif jecha miidiyaan bahanii Fayyisaa abaaruun ummata Oromoo abaaruun gantummaa sabaa ( treason) akka ta’etti fudhanna. Atileetiin kamuu miidiyaan bahee waan akkanaa yoo dubbate/ dubbatte tarkaanfiin armaan gadii akka irratti fudhatamu beekuu qaban
Hawaasummaa keessaa baasuu (social ostracization)- du’u hin awwalamu, gaddaa gammachuu isaa Oromoon hin dhaqu, mana isaatii hin nyaannu, mana ofiitti hin affeerru
Oromiyaa keessatti shaakaluufis ta’ee hojjatee jiraachuu hin danda’u.
Dorgommii biyya alaatti godhamu irratti yoo hirmaate waaroo salphinaa offifama.
Kana beekuun qalbiin akka itti yaadan atileetota hundatti himaa.
Hubadhaa midiyaa Mootummaatti waanuma nagayaatis yoo haasoftan keessaa mummuranii faallaa Fayyisaa isin dhaabuu malu. Kanaafuu yoo danda’ame miidyaadhaaf interview kennuu diduu barbaachisa. Dirqama yoo ta’e ammoo waa’ee siyaasaa keessa gonkumaa hin seeninaa. Via Jawar Mohammed
#OromoProtests “Guyyaa boruu atileettonni maqaan isaanii armaan gaditti dha’ameef isaan biroo haala turtii atileetoota biyya itoophiyaa akkasuma qabxilee argamaniif mudannoolee oolompikii #Rio_2016 irratti atileetoota biyyatti mudatan irratti ibsa gaazexxeessummaa akka kennan gaafatamanii tole jedhaniiru.
1. Atileeti Qananiisaa Baqqaalaa
2. Atileeti Daraartuu Tulluu
3. Atileeti Gazzaanyi Abarraa
4. Atileeti Hailee G/sillaasee fi ammaaf atileetoota kanneen maqaan isaanii hin beekamin biroo ta’uun beekkameera. Shira mootummaan kun xaxuuf deemu kan akka atileetii#Fayyisaa balaalleeffachuuf atileettonni kun deemu taanaan diraamaa mootummaan kun isaan dalagisiisuuf jedhu kana irraa gamanumaan akka of qusatan akeekkachiifamuu qaban.Cinaa tokkoon federashinii akka komatan fakkeessanii shira isaan xaxuuf deemu Gabra Egizabeer G/mariam
Kan walitti qabuun garee(team) kana dursu Haileedha.”
Firaafi ollaan jara kana gorfadhaa wanti hamaan akka afaanii hin baane.
Posted by Oromo firee speech at 12:14 PM
AKEEKKACHIISA (Attention): Wayyaaneen Atileetota O...
Reiterating the Oromo political Questions and Ulti...
በሰላማዊ መንገድ የተቃውሞ ሰልፍ ባካሄዱ የኦሮሞ ዜጎች ላይ በተደጋጋሚ እየተፈጸ...
Sirna Gaggeessaa Awaalcha Barataa Amanu’el Girmaa ...